Jaaliyadda Puntland ee Britain oo taageertay go?aankii xukuumadda Puntland, soona dhaweysay in cilaaqaadka ay u jarto dawlada federaalka ah. – Radio Daljir
Kulanka, oo uu soo qabanqaabiyey urur ay ku bahoobeen dhallinta Puntland ee UK oo lagu magacaabo Puntland Youth Network, ayaa waxaa ka soo qaybgay in badan oo ka mid ah qaybaha bulshada, oo si qoto fog uga hadlay dareenkooda ku aaddan go?aanka Puntland ay xiriirka ugu gooysay dawladda federaalka ah, isla markaana ay ku muujiyey sida ay u taageersan yihiin go?aanka goluhu qaatay.
Ka qaybgalayaashu waxay garawsadeen qodobadii dawladda Puntland ay soo saartay ee aasaaska u ahaa burburka xiriirka labada dhinac in ay ahaayeen kuwo xaqiiq ah, xilli horana loo baahnaa Puntland go?aankaan in ay gaarto; waxaa ay madaxda dawladda federalka ah ku dhaliileen in ay ku takri faleen kalsoonidii ummadda, gabi ahaanna ay gabeen xilkii loo igmaday.
C/qafaar Maxamed Guure oo ka tirsan jaaliyadda Puntland ee dalka Britain, kana mid ahaa ka qaybgalayaashii shirkii jaaliyadda ee London ayaa waraysi uu siiyey idaacadda Daljir uga xog warramay kulankooda iyo waxyaabaha ay diiradda ku saareen.